Mpitondra Malagasy Tsy manaja ny programa nampanantenainy ny vahoaka
Kely finoana amin�ny hisian�ny fifidianana ny taona 2018 ny AKFM (Antokon�ny Kongresin�ny Fahaleovantenan�i Madagasikara). Misavorovoro be mantsy ny fiainam-pirenena ankehitriny, hoy ny filohany Rakotomanga Eric.
Maro ihany koa ny fanatsarana na fanitsiana ilaina hapetraka handaminana ny zava-misy eto Madagasikara. Mbola miteraka adihevitra be, ohatra, ny lalàm-pifidianana volavolain’ny kaomisionina mahaleotena mikirakira ny fifidianana. Vaomiera nasionaly tsy hita taratra rahateo hatreto ny maha mahaleotena azy, hoy ity mpitarika antoko politika ity. Tsy laharam-pahamehana ny fomba fijerin’ny fianakaviambe iraisampirenena hirosoana amin’ny fampihavanam-pirenena na fampifanatonana ireo mpanao politika satria tsy nisy ady goavana niseho ohatra ny tany amin’ireo firenen-kafa tahaka an’i Lybia, Syria na Liban teto amintsika, araka ny fanazavany. Raharaham-bahoaka mila vahana haingana izao ny fahantran’ny Malagasy maro an’isa sy ny politikam-panjakana tsy mifanaraka intsony amin’ny hetahetan’ny mponina eto Madagasikara. Hipetraka ho azy moa ny fifandimbiasam-pahefana demokratika raha manaja sy manatanteraka ny fandaharanasa nampanantenainy ny vahoaka ny mpitondra eto amintsika, hoy ny filohan’ny AKFM.